Shaqaalihii WFP, oo la Sheegay in Lagu Hayo Magaalada Hargeysa – Rasaasa News
Shaqaalihii WFP, oo la Sheegay in Lagu Hayo Magaalada Hargeysa
Jun 12, 2011 aal u baahan in loo helo jawaab, oo la Sheegay in Lagu Hayo Magaalada Hargeysa, Shaqaalihii WFP, sida ay ugu suuro gashay maamulka Somaliland oo xidhiidh dhaw la leh Atobiya in uu qariyo shaqaalaha caalamiga ah ee laga soo afduubay degaanka Somalida Atobiya., Waa su
Khilaaf aan wali soo shaacbixin ayaa ka dhextaagan Dawlada Degaanka Somalida Atobiya iyo maamul gabaleedka Waqooyi galbeed Somaliya [Somaliland], ka dib kolkii uu maamulka Somaliland xadhig kaga jawaabay xubno ka tirsan ciidanka wardoonka ee degaanka Somalida, oo ku raad joogay shaqaalihii WFP.
Maamulka Somaliland ayaa xidhiidh dhaw la lahaan jiray Ethiopia, xiligii uu M/weynaha ka ahaa Daahir Riyaale Kaahin iyo M/weynihii ka horeeyey Cigal.
Ha yeeshee tan iyo intii xilka M/weynenimo ee Somaliland uu la wareegay Axmed Maxamed Siraanyo, ayaa waxaa soo baxayey isfaham la,aan u dhaxaysa Atobiya iyo Maamulka Somaliland.
M/weyne Siiraanyo ayaa kolkii uu xafiiska yimidba meesha ka saaray heshiiyadii hore ugu dhaxeeyay Atobiya iyo Maamulka. Arintaas oo ka cadhaysiisay dawlada Atobiya oo iyaduna kaga jawaabtay in ay cidhiidh ka galiso maamulka dhinaca diblomasiyada.
Mudo ka dib waxaa soo baxay in M/weyne Siiraanyo uu xidhiidh dhaw la yeeshay garab ka mid ah ururka ONLF, oo isagu ka dagaalama degaanka Somalida [ogaden].
July 2010, 150 dagaal yahan oo ka tirsan ururka ONLF, ayaa waxay ka soo dageen xeebaha Maamulka Somaliland, kuwaas oo uu sirdoonka Atobiya ka warhelay loona dhigay ciidamo xuduudka u dhaxeeya maamulka Somaliland iyo degaanka Somalida Atobiya.
Xidhiidhka u dhaxeeya maamulka Somaliland iyo Atobiya, ayaa sii xumaaday, ka dib kolkii ay Atobiya fahmatay in Maamulka Somaliland uu dhigayo jilaabooyin uu ku xumaynayo amaanka Atobiya.
Dadweynaha Somaliland oo dhaqqalahoodu aad ugu xidhan yahay degaanka Somalida Atobiya, ayaa ku eedeeyey madaxweyne Siiraanyo in masuul ka yahay xidhiidhka xumaaday ee u dhaxeeya maamulka Somaliland iyo Atobiya. Waxayna dadweynaha Somaliland ku khasbeen Siiraanyo uu badalo siyaasadiisa ku aadan Atobiya.
February 2011, 75 dagaal yahan oo ka tirsan ururka ONLF, ayaa ka soo talaabay xadka u dhaxeeya degaanka Somalida Atobiya iyo maamulka Somaliland. Waxayna masuuliyiinta Dawlada degaanka Somalidu yaqiinsadeen in Somaliland ay dabada ka soo riixayso mucaaradka degaanka.
Masuuliyiinta dawlada degaanka Somalida Atobiya ayaa dhawr goor ku eedaynayey maamulka Somaliland in uu hooy siinayo ururada mucaaradka ah ee Atobiya. Kuwaas oo ka soo talaaba xuduudka ka dibna waxyeelo ka gaysta gudaha degaanka Somalida Atobiya.
June 2011, wardoonka dawlada degaanka Somalida Atobiya, ayaa ka war helay in shaqaalihii WFP, ee bishii May 13, laga afduubay degaanka Somalida Atobiya, lagu hayo magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland.
Sida aan xog ku helay xubno ka tirsan ciidanka wardoonka ee dawlada degaanka Somalida Atobiya, ayaa ka talaabay xadka Somaliland iyaga oo ku raad jooga shaqaalaha WFP, ee ku afduuban Hargeysa.
Todobaadkan dhexdiisa ayaa laga warhelay maamulka Somaliland in uu xidhay laba xubnood oo ka tirsan ciidanka wardoonka ee degaanka Somalida Atobiya.
Dawlada degaanka Somalida ayaa waydiisatay maamulka Somaliland in uu soo celiyo xubnaha la xidhay, ee la sheegay in ay ka tirsan yihiin ciidanka degaanka. Somaliland way diiday in ay arinkaas u dhaga nuglaato, waxayna tidhi maxkamad baanu saari xubnaha sharci darada ku soo galay Somaliland.
Maamulka Somaliland, ayaa xiligii Daahir Riyaale iyo Cigaal, waxay qabteen dhawr jeer oo kala duwan dad badan xoogsato ah oo u dhashay degaanka Somalida Atobiya, dadkaas oo ay sheegeen in ay ka tirsan yihiin ururka ONLF.
Waxaa isweydiin leh in isbadalka siyaasadeed ee Somaliland uu ku kooban yahay madaxweyne Siiraanyo iyo in ay la qabaan siyaasiyiinta maamulka Somaliland.
Siyaasitiinta degaanka Somalidu waxay u aanaynayaa isbadalka Siyaasadeed ee ku yimid maamulka Somaliland, ee ku wajahan Atobiya in uu sal u yahay nabada dhexe martay ururka ONLF iyo dawlada Atobiya.
Waa su,aal u baahan in loo helo jawaab, sida ay ugu suuro gashay maamulka Somaliland oo xidhiidh dhaw la leh Atobiya in uu qariyo shaqaalaha caalamiga ah ee laga soo afduubay degaanka Somalida Atobiya.
War Deg Dega: Tuulada Ceel-Xaar oo 15 Ruux Xalay Kooxda Jwxo-shiil, ku Dishay